Nampahafantatra ny tahirimbolam-panjakana fa ny alatsinainy 13 jolay hatramin’ny alarobia 15 jolay ary mitohy ny alakamisy 23 jolay no fanaterana ny « certificat de vie » ho an’ireo mpandray fisotroan-dronono amin’ny alalan’ny banky. Aterina eny amin’ny Paierie Générale eny Antanimena izany, amin’ireo daty ireo. Tsy misy fandraisana « cértificat de vie » araka izany ao amin’ny PGA eny Antaninarenina, ny alakamisy 16 jolay hatramin’ny alarobia 22 jolay. Tanjon’ny fandaminana hatrany ny fisorohana ny firongatry ny valanaretina covid-19.
Hentitra ny CCo Boeny amin’ny fampanaraha-dalàna. Namoaka didim-pitondrana monisipaly ny kaominina Mahajanga izay manamafy ny fepetra eo amin’ny fanajana ny fihetsika fiarovana rehetra tokony hatao. Mitarika avy hatrany amin’ny fanagiazana ny fiara fitaterana ny tsy fanaovan’ny mpamily na ny mpanampy azy arovava sy orona. Eo koa ny fitondrana mpandeha mihoatra na amin’ny seza volamena. Ho an’ny Bajaj, olona roa ihany no azo entina.
Nisy ny fizarana fanampiana ho an’ireo fianakaviana sahirana tao amin’ny kaominina Ivato, omaly. Nojerena manokana ireo tsy mbola nisitraka fanampiana mihitsy hatramin’izay tao anatin’izao vanim-potoan’ny hamehana ara-pahasalamana izao. Avy amin’ny ben’ny Tanàna, Penjy Randrianarisoa sy ny malala-tanana ao an-toerana ary ireo mpandraharaha amin’ny sehatra tsy miankina no nahafahana nanao izao fanampiana ho an’ny olona sahirana izao. Nahazo vary, legioma, voamaina, sira, savony, siramamy… ireo sahirana ireo.